Medijuana mbeu | MyWeedSeeds.com
Zvibereko: kusvika 19oz | 550g m2
Medijuana yekurapa mbanje is indica-yakanyanya mbanje, yakanyatsogadzirirwa vanhu vanoda kushushikana kwepanyama kana kwepfungwa. Medijuana inozivikanwa 100% yemusango mushonga wezvirwere zvakawanda. Iye anoshandiswa kubatsira ne chemotherapy, migraines, kurara matambudziko, uye kurwadziwa kusingaperi. Medijuana yakasimba, inokurumidza kukura, uye yekutanga maruva akasiyana ayo anogona kurimwa zvirinyore nevarimi vekutanga-nguva uye vatsva vembanje. Iye anoenderana nekudyara panze, mukati, kana mune greenhouse uye anokura mugungwa regirini (SOG) system. Anokura kusvika pakati nepakati aine dense branching uye inoshamisa gobvu repakati cola (pamusoro bud). Iye anogadzika yakakura, ine simba buds iri kufashukira neTC makristasi uye inonamira resin. Medijuana inogadzira yakasimba uye inonaka inonaka ine shuga ine twist, uye inosiya aftertaste inoyeuchidza hashi. Kukwirira kwaro is indica - yakasimba kwazvo, inofadza muviri wese-nematombo. Fans ye "couch lock" vanomunakidza, asi vanoshandisa mbanje yekurapa vanofanirwa kutanga nemadosi diki. Izvi zvakasiyana zvinogona kuputa kana kutorwa nemuromo seti kana chinongedzo chekudya.